Yakavanzika Inopisa Girazi, Yakavanzika Screen Mudziviriri - OTAO
Dzidza ZVIMWEtora mutengo
NEW PROUDUCTS KUTANGA
OTAO Yakasimba R & D rutsigiro rwesimba kuenderera mberi nekutanga zvigadzirwa zvitsva kubatsira vatengi vedu kuti vawane mamwe masheya emusika.
iPhone 12 dzakateerana Corning Gorilla yakanyorova girazi ...
Samsung S21 Ultra 3D Kupisa-kukotama TPU Screen Pro ...
2.5D 0.33mm Bvisa Wakatsamwa Girazi ye iPhone 12 ...
Samsung S21Ultra 3D Full guruu Wakatsamwa Glass Sc ...
Samsung S21 Plus 2.5D Yakazara Glue Wakatsamwa Girazi ...
OTAO inopa zvimwe kuunganidza uye kugadzirisa yevadziviriri vechidzitiro,
uye dziviriro mhinduro kusvika pane zvinodiwa nemutengi kana musika
3D UV KUKUDZWA KUGODZORA Girazi
CORNING PREMIUM Girazi
2.5D YEMAHARA Girazi
Shenzhen OTAO Technology Co, Ltd. yakasarudzika mukugadzira uye kugovera kweyekudzivirira chidzitiro, ndiyo imwe yekumira mhinduro mupi wekuchengetedza screen uye kuchengetedza skrini. OTAO inopa akasiyana eprimiyamu zvinhu uye akawanda-mashandiro escreen dziviriro, uye uigadzirise kune akasiyana madhijitari, senge nhare mbozha, Pad, piritsi, laptop, smartwatch, enda pro, kamera, Mota, midziyo yemumba, uye michina nezvimwe.
Seimwe inotungamira pasi rese inogadzira skrini inodzivirira muindasitiri, OTAO ® inoramba ichigadzira chigadzirwa chitsva, ichivandudza mhando yechigadzirwa, gonesa masevhisi edu kune vatengi vedu, tichigovera vatinoshanda navo uye vatengesi vemakambani.
"Kubatsira vatengi vedu kukura zvakanaka uye kuva vakasimba" ndiyo pfungwa yedu huru yemasevhisi
- Mr.Andy Huang, Mutungamiri weOTA,
Iwe wega R & D timu / In-imba lab uye zvishandiso zvekuramba uchipa mitsva uye yepamusoro mhinduro.
Kurumidza kuburitsa mhando nyowani & Kurumidza kuendesa nemusika musika uye zvemidziyo mitsva
100% yakazara yekuongorora, uye yakazara TQM system yekuvimbisa mhando yeumwe neumwe maitiro
Yakasarudzika saizi dzakasiyana kana zvigadzirwa zvevatengi zvinodiwa pane zvishandiso uye bhajeti.
Nyika uye nharaunda
Iwo chaiwo mazwi kubva kune edu VIP Vatengi
Kushanda pamwe chete kutenderera makore manomwe neboka reOTAO, nekuda kwekushanda kwavo nesimba uye nerutsigiro, uye gara uchitipa zvimwe zvinhu zvitsva uye zvigadzirwa zvemhando yepamusoro Ivo vanoteedzera edu odhi zvakanyatsonaka kudzamara tazovatengesera vatengi vedu. Iyo OTAO skrini inodzivirira inotengeswa zvakanaka munyika yangu, uye kuunza rimwe bhizinesi kwatiri .....
Isu takagamuchira zvakanaka zvirevo kubva kune vatengi vedu. Zvinoshamisa. Ndakafara chaizvo kutora girazi rakadzikama kubva kwauri zvakananga. Ivo vachakurumidza kuwedzera icho kune avo ese ezvitoro zvitoro uye kupfeka kwavo online zvitoro. Tinotenda OTAO yekutengesa inotipa zano rechokwadi uye zano tisati taisa odha nguva dzese ...
Isu takaona kukura nekukura kweOTOO, nezvakawandisa zvigadzirwa uye mhando yakanaka. Saiye muridzi wechiratidzo, tinoda kupa vatengi chigadzirwa nemhando yakanaka uye nemutengo wakanaka. OTAO yagara ichitipa rutsigiro. Tine chivimbo kubva kwariri uye tinotsvaga kubatana pamwe ...
Isu tinopa 24-awa sevhisi, ndapota taura nesu zvakananga!Bvunzurudza IZVOZVI